Otu esi etinye Linux Kernel 5.15 na Ubuntu 20.04 - LinuxCapable
Na Mọnde, Nọmba 2, 2021 by Jọshụa James
Wụnye Linux Kernel 5.15 na Ubuntu
N'ime nkuzi a, ị ga-amụta otu esi etinye Linux Kernel 5.15 kacha ọhụrụ na Ubuntu 20.04 LTS Focal Fossa.
OS akwadoro: Ubuntu 20.04 ma ọ bụ karịa.
Ihe ndọghachi azụ bụ nke a bụ PPA a na-atụkwasịghị obi na ọ bụghị ntọhapụ nke ndị otu Ubuntu, mana nyere akụkọ ihe mere eme nke PPA, ọ dị mma dịka PPA ọ bụla a ma ama. I kwesịghị ịdị na-etinye nke a na sistemu nwere mmetụta ma ọ bụ ụdị mmepụta agbanyeghị.
Nke mbụ, wụnye LTS Mainline Tuxinvader PPA:
Ozugbo ịbanye na sistemụ Ubuntu gị, gbasoo iwu na-esonụ iji kwado ụdị kernel na-agba ọsọ.
Ihe atụ mmepụta Ubuntu 20.04:
Ekele, ị tinyela kernel 5.15 kachasị ọhụrụ na sistemụ arụmọrụ Ubuntu gị.
Iji dobe kernel 5.15 gị ka ọ dị ọhụrụ, ị ga-eji mmelite dabara adaba na iwu nkwalite iji dọpụta mmelite sitere na ebe nchekwa PPA dị ka ngwugwu ọ bụla na sistemụ Ubuntu gị.
Ị mụtala ka esi etinye kernel 5.15 kacha ọhụrụ na usoro Ubuntu 20.04 gị na nkuzi.
Ekwesịrị ịmara ma ọ bụrụ na sistemụ gị bụ ihe nkesa na-emepụta ihe, a ga-adụ ọdụ ka iji kernel dị ugbu a na-ebuga na Ubuntu ma ọ bụ jiri ụdị HWE maka nkwụsi ike kachasị. Agbanyeghị, nke a bara uru ịnwale maka ndị chọrọ ịnwale kernel 5.15 maka nkwado ngwaike ọhụrụ ya.
Otu esi etinye Linux Kernel 5.15 na Debian 11 Bullseye
Categories Ubuntu Tags Linux kernel, Ubuntu 20.04 LTS Focal Fossa Mail igodo
Wụnye GNOME 41.1 Desktọpụ na Ubuntu 20.04
Sọnde, Nọvemba 21, 2021 2:48 mgbede
Enweghị ike iwu onye ọkwọ ụgbọ ala nvidia-dkms (ụdị 390)
Tuzdee, Nọvemba 23, 2021 6:27 nke abalị
Ị nwalela ndị ọkwọ ụgbọala 470.xx? Dabere na kaadị eserese gị, enwere ike ịkwado ya nke ọma na 5.15.